Isayensi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umhlaba we isayensi ihlanganisa ulwazi oluningi, lapha sizozama ukukunikeza lonke ulwazi oludingekayo ukuze ujabulele isayensi e- isimo sezuluSithemba ukuthi ukujabulela konke nokuthi awukhohlwa ukuthi ukwazi kahle okusizungezile kuhlala kusenza sibe namandla kakhulu kulesi simo.
Idatha, imininingwane ngokujwayelekile, izinto zemvelo kanye nokunye okude. Lokho kwenza lesi sikhala sibe yindawo ekahle yokujabulela ulwazi ngokujwayelekile futhi ngubani owaziyo, sivuse okuthile kokungaphakathi kwethu okusenza sibe nentshisekelo ngendaba eyinkimbinkimbi njengesayensi.
Por IsiJalimane Portillo kwenza Izinsuku ze-3 .
Umfula iYangtze eChina ungumfula ohlaba umxhwele onobude obungamakhilomitha ayi-6.300 kanye nendawo…
Por IsiJalimane Portillo kwenza Isonto eli-1 .
Abantu abaningi abazi ukuthi iyini i-ecosystem. I-ecosystems yizinhlelo zebhayoloji ezakhiwe ngamaqembu ezinto eziphilayo ezisebenzisanayo...
Isethelayithi esezingeni eliphezulu kakhulu emhlabeni yokubuka umhlaba yethulwe eVandenberg Air Force Base...
Iplanethi yethu ineminyaka engaphezu kwezigidi ezingu-4.500 zokuziphendukela kwemvelo. Kuso sonke lesi sikhathi kube nezinguquko ezimbalwa…
Ezindaweni ezihlukene zemvelo yomhlaba wethu kunezinhlobo eziningi zenhlabathi ezincike esimweni semvelo njengesimo sezulu,…
Por IsiJalimane Portillo kwenza Inyanga e-1 .
Okwethu okuhlangenwe nakho kusitshela ukuthi umbala wolwandle ungashintsha kakhulu ngokuhamba kwesikhathi nendawo: kusuka…
Por IsiJalimane Portillo kwenza Izinyanga ze-2 .
Inombolo u-e, inombolo ka-Euler noma i-Napier constant eyaziwa kakhulu ingenye yezinombolo ezingenangqondo ezinenani eliphakeme kakhulu...
Kungani izindiza zindiza
Nakuba sisonyakeni ka-2022, basebaningi abantu abangaqondi ukuthi kungani amabhanoyi endiza. Ukuba...
Izibalo bezikhona kusukela ekuqaleni. Uma sikholelwa ekutholakaleni kwethambo le-Ishango (eminyakeni engaphezu kuka-20.000 edlule…
I-fractal yinto yejometri engahlukaniswa ibe izingxenye, ngayinye ifane nento yokuqala. Ama-fractals...
Ngo-May 8, 1654, edolobheni laseJalimane iMagdeburg, uMbusi uFerdinand III nethimba lakhe babonisa…